Guddigii baarayey kiiska Ikraan Tahliil oo natiijo hordhac ah soo saaray
November 21, 2021 - Written by Editor
Muqdisho:-Guddigii baarayey kiiska Ikraan Tahliil Faarax, oo ah gabar ka tirsan NISA oo la la’yahay tan iyo June 26 2021, ayaa caawa soo saaray natiijo horudhac oo ay sheegeen inay kasoo baxday baaritaankooda.
Waxa uu sheegay in hay’adda NISA ay si wanaagsan ugala shaqeysay baaritaanka.
Waxa uu intaas ku daray in Guddiga uu la wareegay gal baariseedka NISA ee sheegaya in Ikraan ay dileen Al-Shabaab.
Kooxda Al-Shabaab ayaa horey u sheegtay inaysan wax shaqo ah ku laheyn dilka Ikraan Tahliil Faarax.
Inkasta oo guddiga uu sheegay in natiijada ay hurdhac tahay, haddana waxay sidoo kale sheegeen in kiiska lagu soo xiray in cid kasta oo xog ka haysa Ikraan ay lasoo xiriiraan haya’adaha dambi baarista.